घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू Lys मूससेट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो लाइफ मूससेटको जीवनीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, आमा बुबा, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षिप्तमा, हामी लाइस Éमिलियन मौसेट, फ्रान्सेली पेशेवर फुटबलरको इतिहास चित्रण गर्छौं। Lifebogger आफ्नो शुरुआती दिनहरुबाट शुरू हुन्छ, जब उनी EPL मा प्रख्यात भए। तपाईंलाई यस बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उहाँको जीवनको चित्रण सारांश छ।
लाइफ एण्ड राइज राईज अफ लाइस मूससेट।
हो, सबैलाई थाहा छ कि उहाँ एक शक्तिशाली धावक र एक कुशल फिनिशर हुनुहुन्छ, जो एक अवसरको साथ प्रस्तुत गर्दा विगतको डिफेन्डरहरू बढाउन सक्षम छ। यद्यपि, केवल एक हात फुटबल प्रशंसकहरूले लाइस मौसेटको जीवन कहानीको हाम्रो संस्करणलाई ध्यान दिन्छन् जुन निकै चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Lys मूससेट बचपन कहानी:
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, उहाँ उपनाम उपनाम लिनुहुन्छ “Luffy“। Lys ilimilien Mousset Mendy। उहाँ फेब्रुअरी १ ​​8 1996 of को his मा लेउ हाभ्रेमा उत्तरी फ्रान्सको नोर्मान्डी क्षेत्र फ्रान्सको प्रमुख बन्दरगाह शहर मा उनका बाबुआमाको जन्म भएको थियो।
लायस मौसेतको परिवारको मूल ले हभरे बन्दरगाहबाट हो जुन इ 150्ल्यान्ड दक्षिण तटमा १ just० किलोमिटर टाढा छ। लाइस मौसेटको परिवार आएको सुन्दर शहर एकपटक २०० 2005 मा युनेस्कोले वर्ल्ड हेरिटेज साइटको रूपमा वर्णन गरेको थियो जुन यसको आधुनिक कला संग्रहालय र प्रभावशाली चित्रकलाहरूको कारण हो।
लायस मौसेतको परिवार मूल ले हभरेको बन्दरगाह शहरबाट छ। उनीसँग गहिरो अफ्रिकी परिवारको जरा पनि छ - सेनेगल, पश्चिम अफ्रिकाबाट
यद्यपि हामी विश्वास गर्छौं लायस मौसेत फ्रान्सबाट आउँदछ। तर उसको हेराईको आधारमा, तपाईं सजिलैसँग आफूसँगको परिवारको जरा रहेको छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। ठिक छ, तपाईंको अनुमान सही थियो। फ्रान्सेली व्यक्तिको परिवारको जरा पश्चिम अफ्रिकी देश सेनेगलबाट आएको छ। तपाईंलाई थाँहा थियो?… लायस मौसेटका बुबा सेनेगाली हुन् जबकि उनकी आमा, अर्कोतर्फ, फ्रेन्च हुनुहुन्छ।
मौसेट लाइस मध्यमवर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँछिन् र आफ्ना आमाबुबासँगै हुर्केका थिए जसले शुरुमा उनलाई फुटबल खेल्नबाट रोकेका थिए। उसको बुबा जस्तो कम सख्त थियो, Lys को आमा हुनुहुन्छ साथीले फूटबल खेल्नका लागि उनका छोराले पुस्तक पढ्न सम्झौता गर्नु हुँदैन भनेर जिद्दी गरे। फ्रान्सेली मानिस एकपटक आफ्नो ट्विटर खाताबाट आफ्नो परवरिशको बारेमा जानकारी (तल छवि संग) प्रकट गरे।
लास मौसेटको आमाले उसलाई फुटबल खेल्नबाट रोक्दछ जब ऊ एक बच्चा थियो।
Lys मूससेट शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप:
घरबाट तनावको सामना गर्नुपर्दा लाइसले अझै आफैं तस्करी गर्ने साथीहरूसँग फुटबल खेल्ने उपाय फेला पारे। अन्त्यमा, फुटबलले शिक्षाविद्हरूमाथि विजय हासिल गर्‍यो र धेरै विश्वस्त भए पछि लाइसका आमाबाबुले विशेष गरी उनको आमाले अन्ततः उनको सपनाहरूमा विश्वास गरे। दुबै आमा र बुबाले समर्थन गर्नुभयो, उनीहरूले आफ्नो छोरालाई प्रो बनाउने प्रयासमा कडा परिश्रम गर्न बाहिर धकेले।
हरेक अन्य फुटबल महत्वाकांक्षी बच्चाको जस्तो छ एक ठूलो सपना उनको शहरको सब भन्दा बढि पेशेवर खेलकुद टोली र सबैभन्दा पुरानो फ्रान्सेली फुटबल क्लब एकमा सहभागी हुन। यद्यपि उनी जान्दछन् कि प्रतिस्पर्धी क्लबमा सामेल हुन सजिलो छैन जोसँग एकेडेमी खेलाडीहरू थिए पल पोगाबा, दिमित्री भुक्तानीकर्ता, रियाद मह्रेज, बेंजामिन मिन्डी, तिनीहरूका रोस्टरमा आदि।
लायस मउसेटसँग यी एकेडेमी उत्पादनहरूका बारेमा कथाहरू थिए र उनीहरूको पाइला पछ्याउने कसम्यो।
ले हभरेमा सामेल हुने प्रारम्भिक कठिनाइहरूको साथ, फ्रान्सेली व्यक्तिले अन्य विकल्पहरू पनि लिए। Of बर्षको उमेरमा लाइसले आफ्नो छिमेकीको फुटबल स्कूलमा पढ्न शुरू गर्यो Soquence Graville। जसै उसको विकास भयो, ऊ अलि ठूलो अकादमीमा लाग्यो हाभ्रे काउक्रिउभिले। दुई वर्ष एकेडेमीमा बिताएको उनले अद्वितीय प्रतिभाको रूपमा विकसित भएको देखे, जसले उनलाई महसुस गर्‍यो कि उनी ले हभ्रेसँग एक परीक्षण चुनौती सामना गर्न तयार छन्।
Lys मूससेट प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
त्यस समयमा जब उनले परीक्षणहरू पार गरे र प्रतिष्ठित ले हभरेमा सम्मिलित भए, लाइस मौसेट आमा बुबा र परिवारका सदस्यहरूको आनन्दको कुनै सीमा थिएन। लायस १० वर्षको उमेरमा २०० H सालमा ले हभ्रे एकेडेमीमा सामेल भए।
ला हभेर युवा प्रणाली मार्फत नौ वर्ष बिताए। २०१२ मा उनी ले हभ्रे द्वितीयमा स्नातक भए (क्लब आरक्षित टीम), एक क्षण जसले उसको जीवनमा नयाँ अध्याय खोल्नुभयो। केही समय अनुपस्थित भएपछि, मौसेटले पहिलो टोलीको लागि पदार्पण गर्न अघि १ goals गोल गर्दै, ले हभ्रे द्वितीयमा प्रभाव पार्न शुरू गरे।
लास मौसेट बायोग्राफी - फेम कहानीको लागि रोड:
२० बर्षको उमेरमा, लायस मूससेट प्रख्यातताको लागि भोकाए। तपाईको भविष्य उज्ज्वल देखिन्थ्यो ले हभरेमा, फ्रान्सेली फुटबलर आफ्नो देश छोडेर विदेश जान जान उत्सुक थिए।
निर्णय: २०१––२०१ season सत्रमा लाइस मौसेटले एन्थोनी मार्शलको पाइला पछाडि फ्रान्समा आफ्नो क्यारियर अनुसरण गर्न छोडे। उनको इ England्ल्यान्डको यात्राले उनलाई एएफसी बोर्न्नेमाउथमा सामेल भएको देख्यो जो उनीहरूको दोस्रो लगातार सत्रमा प्रिमियर लिगमा थिए।
इ England्ल्यान्डको दक्षिणी तटमा फ्रान्सेली मानिसका लागि योजना अनुसार चीजहरू भएनन्। गरीब लायस मौसेट खेल समयको अभावबाट ग्रसित थियो, यो विकासले उनलाई बोर्नेमाउथसँग उनका तीन बर्षको बर्षमा सबै प्रतिस्पर्धामा केवल पाँच गोलको प्रबन्ध गरेको देख्यो। उनले एक पटक फ्रान्सेली अखबार पेरिस-नोर्मान्डीलाई भनेका शब्दहरूमा निराश भएर बोले। उसले भन्यो;
"यदि म स्ट्राइकरको रूपमा तेस्रो, चौथो वा पाँचौंमा हुन चाहन्छु भने, म आर्सेनल वा टोटेनहमको लागि हस्ताक्षर गर्न सक्थें।
यो अनौठो हो, तर मलाई लाग्छ कि म एक पक्षमा छुट्टिएको छु, र यसले मलाई खेलको अभावको कारण स्कोर नगरी एक सत्रमा जान सक्छु भनेर सोच्न दिक्क लाग्छ।
स्पष्ट कुरा, म एक दर्शक जस्तै लाग्छ। म यस जस्तो रहन सक्दिन म सधैं इ England्ल्याण्डमा हुने सपना देख्दछु, तर यी सर्तहरूमा होइन।
Lys मूससेट बायो - प्रसिद्धि गर्न उठ्नुहोस्:
घर फिर्ता, यो Mauset परिवारका सदस्यहरु को लागी कठिन थियो विशेष गरी उसको आमा बुबा को उनीहरुको आफ्नै एक बोर्नेमाउथ संग pecking अर्डर तल देखेर सामना गर्न। विकल्पहरूको खोजी गर्दै, लायस मौसेटले पहिलो फुटबल टोली स्ट्राइकरको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न विभिन्न सांप र अंग्रेजी फुटबलको भर्या .बाट यात्रा शुरू गर्यो।
जुलाई २०१ 21 को २१ औं दिनमा, लाइस मउसेटले भर्खरै प्रमियर लिग क्लब शेफील्ड युनाइटेडको लागि हस्ताक्षर गरे। धन्यबाद, माउसेटले सेफिल्टको साथ पहिलो छनौट स्ट्राइकरको रूपमा अधिक नियमित रूपमा चित्रित गरिएको छ।
लेखनको समयमा, माउसेटको खेलको सबैभन्दा ध्यान दिनुहुने पक्ष भनेको उहाँको प्रभावशाली शक्ति हो। उहाँ एक शक्तिशाली धावक र एक कुशल फिनिशर हुनुहुन्छ जो अवसरहरू प्रस्तुत गर्दा विगतका डिफेन्डर्सहरूलाई बढावा दिन सक्षम छन्। तल उसको खेलको शैलीको भिडियो प्रमाणको एक अंश छ (FUT 10 मा क्रेडिट).
Lys मूससेट सम्बन्ध जीवन:
शेफिल्ड युनाइटेडको साथ उनको ख्याति बढेको साथ, यो निश्चित छ कि अधिकांश प्रशंसकहरू लाइस मउसेटको प्रेमिका वा पत्नी छ कि भनेर चिन्तित भएको हुनुपर्छ। हो, त्यहाँ कुनै सुन्दर तथ्य छैन कि उहाँ सुन्दर छैन। उसको बच्चाको अनुहार राम्रो देखिएको छ वास्तवमा उसलाई हरेक महिलाको प्रेम ईच्छा सूचीको शीर्षमा राख्छ।
लाइस मौसेट गर्लफ्रेंड को हो?
लायस मौसेटले आफ्नो सम्बन्ध जीवन निजी राख्ने तरिकाहरूबाट प्रशंसकहरू चकित भए। गोप्य यात्राबाट र निश्चित रूपमा इन्स्टाग्रामबाट टाढा रहन, लायस मौसेटकी प्रेमिका र बच्चा आमाले उनको मान्छे लाई लाइमलाइटबाट टाढा रहन सहमत गरेका छन।
लास मौसेटको एक छोरी छ।
लायस मौसेत अंग्रेजी फुटबलमा प्रख्यात छ, र उनको छोरीको लागि अझ महत्वपूर्ण छ। फुटबलरको रूपमा आफ्नो व्यस्त तालिकाको बावजुद लाइसलाई आफ्नी छोरीसँग गुणस्तरीय समय कसरी बनाउने र कसरी खर्च गर्ने भनेर जान्दछन्।
कुनै श doubt्का बिना, उसकी सानी केटीले उनीमा मूर्खता ल्याउँछिन्, एक विकास जसले उनलाई सबैभन्दा डट्ने फुटबल बुबा बनाएको छ।
Lys मउसेट व्यक्तिगत जीवन:
लायस मौसेटको व्यक्तिगत जीवनलाई फुटबलबाट टाढा राख्नु तपाईंलाई उसको पूरा तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
सुरु गरेर, उहाँ एक शान्त, शान्त र संकलित फिगर हुनुहुन्छ। फुटबलबाट टाढा लाइस आफ्नो सुन्दर बाल्कनीमा समय बिताउन मन पराउँछिन् जुन दक्षिण यार्कशायर शहरको केन्द्रको अद्भुत दृश्य हो। उहाँ पनि सफा र शीतल टाउकोको मान्छे जस्तो देख्नुहुन्छ जुन उहाँको अनुहारमा निर्विवाद आकर्षणको साथ छ।
Lys Mousset व्यक्तिगत जीवन जान्ने।
Lys मूससेट जीवनशैली:
एक सुपर साप्ताहिक ज्याला को लागी धन्यवाद जुन १,०1,037,089,०XNUMX annual वार्षिक वेतनमा सम्मिलित छ, लायस मउसेट वास्तवमै भव्य जीवन बिताउने माध्यमको रूपमा उपहार हो जुन एक विदेशी जीवन शैलीलाई संकेत गर्दछ। तल अवलोकन गरिए अनुसार लाइसले महँगो कपडा, घडिहरू, जुत्ताहरू खरीद गर्दछ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा होल्ड गर्दछ आफ्नो सुपर महंगा कार मा।
लास मौसेटलाई भव्य जीवन बिताउने माध्यमको रूपमा उपहार हो र यो उनको कार र पोशाक अर्थमा देख्न सकिन्छ।
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, मौसेतले आफ्नो ज्यालालाई महँगो जीवनशैली बिताउन समर्पित गर्ने तरिका पिचमा उनको प्रतिबद्धतासँग मिल्दोजुल्दो छ।
Lys मउसेट परिवार जीवन:
क्यारियर कर्तव्यहरूमा हुँदा लाइस मउसेटको लागि परिवार सबैभन्दा नजिक के हो?। उत्तर उसको सेनेगाली परिवार सम्पदा हो। लायसले आफ्नो सेनेगाली परिवारको जरा समात्छ र आफ्नो सेनागाली भाइहरूसँग टोली बनाउने र रंगीन ह्यान्ड ब्यान्डको साथ आफ्नो सम्पदा प्रदर्शन गर्ने एउटा तरिका छ।
Lys Mousset को परिवार को नजिक।
लेख्ने समयमा जस्तै लाइसको परिवारले निजी र लो-की जीवन बिताए पनि पपाराजी सँधै प्रलोभनमा हुन्छ र सामाजिक मिडियासँग सम्पर्क राख्ने धेरै तरिका। यद्यपि, ओne कुरा पक्का छ। उनका आमा, बुवा, भाई (हरू), बहिनी (हरू) र सम्पूर्ण आफन्तहरू हाल अंग्रेज फुटबल मामिलाहरूको केन्द्रमा रहेको आफ्नो आफ्नै व्यक्ति भएको फाइदा उठाउँदैछन्। हामीले सामाजिक मिडियामा उसको परिवारका सदस्यहरू भेट्नु अघि यो कुरा मात्र हो।
Lys मूससेट अनटल्ड तथ्यहरु:
FACT1: वर्ष ऊ जन्मिएको थियो: तपाईंलाई थाँहा थियो?… १ 1996 64 In मा लायस मौसेटको जन्म भएको थियो, त्यहाँ कुनै गुगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब र रेडिट थिएन। साथै, त्यहाँ कुनै लिंक्डइन, पिन्टेरेस्ट, टम्बलर, स्न्यापचट र फ्लिकर थिएन। त्यस्तै आईफोनहरू, क्यामेरा फोनहरू, आईपडहरू, स्काइप, जीमेल, विकिपेडिया, र आइट्यून्स अझै अवस्थित छैन। त्यो वर्ष निन्टेन्डो XNUMX XNUMX को रिलीज भयो।
FACT2: लास मौसेटको धर्म: उहाँ जुन शहरबाट आउनुभयो, ले हभ्रे आठ पर्सीमा विभाजित छ र यसको २ 24 पूजा स्थलहरू (चर्चहरू र चैपलहरू) छन्। यद्यपि उनको धार्मिक अभ्यासको फोटो प्रमाणको अस्तित्वले हामीलाई मौससेटलाई पनि अपठ्यारो हुन सक्छ भन्ने सुझाव दिन्छ।
FACT3: लास मौसेटको ट्याटू: हामी सबैलाई थाहा छ ट्याटु संस्कृति आजको फुटबल संसारमा धेरै लोकप्रिय छ किनकि यो अक्सर कसैको धर्म वा आफूले प्रेम गरेका मानिसहरूलाई चित्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ। Lys Mousset लेखनको समयमा ट्याटु-मुक्त हुन्छ। जसरी तल उसको फोटोमा एएफसी बोर्नेमाउथको सबैभन्दा मिल्ने साथी जोर्डन आईबेसँग अवलोकन गरिएको छ, त्यहाँ उसको माथिल्लो र तल्लो शरीरमा कुनै मसी छैन।
लास मूससेट ट्याटु तथ्यहरू।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Lys Mousset बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य पढ्न को लागी धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।